के सोशल मिडियालाई अन्य व्यवसायहरू जस्तै प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण चाहिन्छ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अप्रिल 8, 2021 अप्रिल 8, 2021 जोन ह्यारी ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, प्रविधि
उसको परिचय कागजातहरू मार्फत अनबोर्डिंग ग्राहकहरूको व्यक्तित्व पुष्टि गर्ने प्रक्रियालाई तपाईंको ग्राहकलाई चिन्नुहोस् भनिन्छ।
ग्राहकको ठेगाना मान्य छ, यो यसको स्वामित्व दावी गर्ने व्यक्तिको हो।
नाबालिगहरूलाई वयस्क-सम्बन्धित सामग्री उमेर प्रमाणीकरण पहुँच गर्नबाट जोगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
बच्चाहरू प्रायः साइबर गुंडाउने सिकार हुन्छन्, किन कि कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर उनीहरूलाई थाहा छैन।
उसको परिचय कागजातहरू मार्फत अनबोर्डिंग ग्राहकहरूको व्यक्तित्व पुष्टि गर्ने प्रक्रियालाई तपाईंको ग्राहकलाई चिन्नुहोस् भनिन्छ। यो एक आवश्यक प्रक्रिया हो जुन उनीहरूको आवश्यकता अनुसार विभिन्न व्यवसायहरू द्वारा अपनाईन्छ।
तपाईंको ग्राहकलाई तलका प्रकारको प्रमाणिकरणहरू थाहा छ:
यस प्रमाणिकरणमा ग्राहकको अनुहार पहिचान गरिन्छ। यसको लागि बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण प्रणाली प्रयोग गरिन्छ, जसले अनुहारको विवरण डेटाबेस वा छविसँग तुलना गर्दछ। विवरण नाक को आकार र आकार, ठोडी स्थिति र गोलोपन, र टोन र छाला को रंग हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र छवि प्रशोधनले दुई अनुहारहरू बीचको तुलना जाँच गर्दछ।
कागजातको प्रमाणिकरण, अन्य कागजात वा छविको साथ यसको समानता जाँच गर्दै। तर KYC मा कागजातमा डाटा ग्राहक प्रविष्ट गरिएको डाटाको साथ मेल खाएको छ। पहिलो, डाटा फाराम कागजात क्यारेक्टर रिकग्निशन सफ्टवेयर (OCR) को प्रयोगबाट झिकिन्छ। यसले कागजातको छविहरू बाट शब्दहरू, अक्षरहरू र क्याप्चरहरू क्याप्चरको लागि एआई र प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण समावेश गर्दछ।
यसले प्रामाणिकता जाँचहरू पार गर्दछ जस्तै ढाँचा सुधार, होलोग्राम, कागज गुण, र एमआरजेड पहिचान। यो पुष्टि भयो कि कागजात कुनै टेम्परिंग वा फोटोशप प्रयासहरूको साथ मूल हो।
ग्राहकको ठेगाना मान्य छ, यो यसको स्वामित्व दावी गर्ने व्यक्तिको हो। शिपिंग उद्योग र ई-वाणिज्य व्यवसाय झूटा ठेगानाहरूको कारण पार्सल फर्केर ठूलो क्षति भएको छ, त्यसैले तिनीहरू यो सेवा प्राय जसो प्रयोग गर्दछन्।
कागजात छविबाट निकालेको ठेगाना डाटा ग्राहकले दिएको ठेगाना डाटाको साथ मिलेको र प्रमाणित गरिएको छ।
नाबालिगहरूलाई वयस्क-सम्बन्धित सामग्री उमेर प्रमाणीकरण पहुँच गर्नबाट जोगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। KYC सफ्टवेयरले dob फार्म कागजात प्लक गरेर वर्तमान युगको विश्लेषण गर्दछ। त्यसपछि यो जाँच गरियो कि उमेर व्यवसाय द्वारा प्रदान गरिएको निर्दिष्ट कोष्ठकमा पर्दछ।
सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मले तिनीहरूको च्यानलहरूको रक्षा गर्न माथिका सबै प्रमाणीकरणहरू छनौट गर्नुपर्दछ।
तपाइँको ग्राहकले कसरी मद्दत गर्न सक्छ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ?
तल के कारणहरू छन् तीनीहरू KYC सेवाहरू छनौट गर्नुहोस्:
साइबर बुलि .्ग र उत्पीडन
अपराधीहरूले पनि नक्कली विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दछ छुट छुट जस्तै अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न।
बच्चाहरू प्रायः साइबर गुंडाउने सिकार हुन्छन्, किन कि कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर उनीहरूलाई थाहा छैन। प्रयोगकर्ताहरूको उमेर प्रमाणिकरण र उही उमेर प्रयोगकर्ताको कोष्ठ कोष्ठिले यसलाई रोक्न सक्छ। जस्तो १२ देखि १ years वर्ष उमेरका प्रयोगकर्ताहरूले आफूलाई उच्च उमेरको साथ प्रयोगकर्तामा प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। यसले एक राम्रो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म वातावरण सेट गर्दछ।
प्रतिरूपण र बेनामी
सामाजिक मिडियामा नक्कली खाताहरू सिर्जना गर्न गाह्रो काम छैन, एक आपराधिक अभिनेता सजिलैसँग एक वैधको रूपमा दर्ता गर्न सक्दछ। एक व्यक्तिले सजिलै पुष्टि गर्न सक्दैन कि उसले च्याट गरिरहेको व्यक्ति वास्तविक वा नक्कली हो।
यो अनबोर्डिंगको समयमा उनीहरूको आईडी कागजातहरूको माध्यमबाट प्रमाणीकरण गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यहाँ यसको प्रक्रिया छ:
प्रयोगकर्ताले साइन-अप गरेको बखत उसको व्यक्तिगत विवरण दिन्छ
यो जानकारी समर्थन गर्न एक आईडी कागजात अपलोड गर्दछ
कागजात प्रमाणिकरण कागजातमा गरिन्छ
एक प्रत्यक्ष सेल्फी क्याप्चर गरिएको छ र अनुहार पहिचान आयोजित गरिएको छ
सफल प्रमाणिकरणमा प्रयोगकर्तालाई बैंक खाता खोल्न अनुमति छ अन्यथा होईन
अपराधीहरूले पनि नक्कली विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दछ छुट छुट जस्तै अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न। तिनीहरू अन्जानमा परिणामको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। यो खाताको निर्माणको लागि सोधेर अर्को वेबसाइटमा तिनीहरूलाई पुनःनिर्देशित गर्दछ। साइन-अप वा साइन-इन प्रक्रिया पूरा गरेपछि, यो फिसि। लिंकमा देखिन्छ। फिशिंग लि links्कहरू द्वारा, अपराधीहरूले प्रयोगकर्ताहरूको प्रमाणहरू चोरी गर्छन् र तिनीहरूको अनलाइन खाताहरू लिन्छन्।
सोशल मिडियाले विश्वलाई डिजिटल रूपान्तरणमा मद्दत गर्‍यो, यसलाई विश्वव्यापी गाउँ बनाउँदछ। यो केवल एक कनेक्टि platform प्लेटफर्म मात्र होईन तर धेरै व्यक्तिको लागि व्यवसायको साधन पनि हो। पहिचान प्रमाणिकरणले धोखाधडी र घोटालाहरूबाट फाइनान्स क्षेत्रलाई शुद्ध पारेको छ। सामाजिक मिडियाले उनीहरूको च्यानलहरू र प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै प्रकारका अपराधहरूबाट स्ट्रिमलाइन र सुरक्षा गर्न सक्दछ।
सांप्रदायिक समाचार अन्त प्रयोगकर्ता अनुभव निगरानी बजार सामाजिक संजाल
म एक सामग्री लेखक हुँ र डिजिटल मार्केटर पनि, मेरो दर्शकको साथ साझेदारी गर्न नयाँ दर्शकहरूको खोजी गर्दै।